electronics Izithuthi kwaholela - China Fastpcba Technology
usekelo lwe-imeyili 0755-26978877
Call Ukusekela pcba19@pcb-smt.net
Ukuphepha Nesivikelo Soft ibhodi
PCB amandla ukuxhumana
ezishintshayo ezimbonini kwaholela
electronics Izithuthi kwaholela
FASTPCBA Technology Co., Ltd is a professional PCB nomkhiqizi eChina, Shenzhen. Nge engu-14 yentuthuko, FASPCBA liphenduka umakhi unqambothi HDI PCB, ne ukukhiqizwa ikhono 35,000 square metres. FASTPCBA ukuhlinzeka izinga okusezingeni angenalutho inkonzo PCB futhi PCB inhlangano, kuhlanganise izingxenye nokuhlonza, umsebenzi test, conformal enamathela nasemhlanganweni ephelele amaklayenti emhlabeni wonke. Isu lethu ibhizinisi nolaka kusenza sikwazi ukuletha amasevisi okusezingeni eliphezulu yokuncintisana for yethu ...
FASTPCBA Technology Co., Ltd is a professional PCB nomkhiqizi eChina, Shenzhen. Nge engu-14 yentuthuko, FASPCBA liphenduka umakhi unqambothi HDI PCB, ne ukukhiqizwa ikhono 35,000 square metres. FASTPCBA ukuhlinzeka izinga okusezingeni angenalutho inkonzo PCB futhi PCB inhlangano, kuhlanganise izingxenye nokuhlonza, umsebenzi test, conformal enamathela nasemhlanganweni ephelele amaklayenti emhlabeni wonke.
Isu lethu ibhizinisi nolaka kusenza sikwazi ukuletha amasevisi okusezingeni eliphezulu yokuncintisana for ahlukahlukene yethu, ukuncintisana ikhasimende base. Ngokusebenzisa lelisu, siyakwazi ukwenza okusheshayo, izinqumo nezimo ekuphenduleni nezimo zezimakethe ezishintshashintshayo sakhele kakhulu kanye nezinzuzo kumakhasimende.
Njengoba Isevisi, sinikeza 7days 24hours on-line professional Oku-ukudayiswa, Okuthengisa Nangemva Kokufunda IZwi LikaNkulunkulu-Yamadivayisi inkonzo ukuxazulula yimuphi umbuzo mayelana ne-oda. Noma nini, noma iyiphi imfuneko uzothola impendulo ngokushesha kusukela ukwesekwa abasebenzi bethu abaqeqeshwe kahle futhi enobungane.
Emakethe yethu eyinhloko Yurophu, enyakatho e-USA, i-Australia, eNingizimu Melika, nase-Asia. sizokwenza umzamo okuningi ukwakha uxhumano namakhasimende ngaphezulu endaweni ngaphezulu. Zonke sifuna ukwenza, ukuxhuma nezwe imikhiqizo yethu, ukwabelana Value, Happyness futhi Impumelelo namakhasimende ngaphezulu.
PCB ne-SMT bandla elilodwa-stop service
FR4, okusezingeni eliphezulu TG FR4, imvamisa high, alum, FPC
Min.thickness ngoba izingqimba kwangaphakathi
(Cu ukujiya bayakhishwa)
Engaphandle Cu isisindo
Inner Cu isisindo
PTH imbobo ukubekezelelana
NPTH imbobo ukubekezelelana
Green, abamhlophe, abansundu, obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka ...
Min solder imaski clearanace
abamhlophe, abansundu, lomtfubi, loluhlata kwesibhakabhaka ...
100% ukuhlolwa Functional
-X-ray, Aoi Test, ukuhlolwa Functional
Max Usayizi sekugcineni ibhodi
CHA MOQ (1pcs)
HASL, ENIG, ukucwiliswa esiliva, ukucwiliswa ithini osp ...
Square, umbuthano, okungajwayelekile (nge jigs)
Plastic, metal, isikrini
Q1: Iyiphi inkonzo na?
FASTPCBA: Sinikeza isixazululo turnkey kuhlanganise PCB bumbela, SMT, umjovo plastic & zensimbi, inhlangano yokugcina, ukuhlolwa kanye nezinye service value-added.
FASTPCBA: wethu amasevisi PCB / PCBA ngokuyinhloko ngenxa izimboni kuhlanganise Medical, Izithuthi, Ukuxhumana.
Q4: Ingabe singamlindela nokuhlola izinga ngesikhathi ukukhiqizwa?
FASTPCBA: Yebo, kumelwe uvulelekile futhi akafihli lutho ku inqubo ngamunye sokukhiqiza lutho. Samukela ikhasimende nokuhlola inqubo yethu zokukhiqiza futhi uhlole endlini.
FASTPCBA: Sizimisele ngemvume NDA umphumela yikhasimende ohlangothini umthetho wendawo futhi ethembisa ukugcina idatha amakhasimende e okusezingeni eliphezulu ezingeni oluyimfihlo.
FASTPCBA: Ukuze PCB nekhotheshini, sicela unikeze Gerber idatha / amafayela kanye okubonisa nezidingo ezihlobene lwezobuchwepheshe kanye noma yisiphi isidingo esikhethekile uma unayo.
Ukuze PCBA kwikhotheshini, sicela unikeze Gerber idatha / amafayela futhi BOM (bill of izinto), futhi uma udinga ukuba senze umsebenzi yokuhlola, sicela unikeze ukuhlolwa imfundo / inqubo.
FASTPCBA: Delivery ngokuya EXW, yezimali zikagesi.BREAK, Fob, DDU njll sonke etholakala esekelwe quote ngamunye.
FASTPCBA: Ngokuvamile amahora angu-24 namahora angu-48 njengoba nje ukuthola unjiniyela yangaphakathi ukuhlola kokuqinisekisa.
FASTPCBA: Cha, asinawo MOQ mfuneko, seseke amaphrojekthi akho kusukela prototypes ezintweni mass.
Okulandelayo: kagesi kwaholela
Car Automotive Electronics
electronic wemoto Assembly
electronic wemoto IBhodi
electronic wemoto PCB
Electronics OEM 94v-0 PCB IBhodi
Electronics PCB Ukukhiqiza
electronics yezimoto PCB
electronics yezimoto ibhodi Soft
Lokhu Isifanekiso niche micro for izigaba ibhizinisi, okungukuthi Petro - Industrial-HTML Isifanekiso. kwakukhona ngokweqile lesi sifanekiso usebenzisa HTML / CSS.
Yiziphi izici ezihlobene PCBA ezimbi ...
Yiziphi imithetho PCB isakhiwo e t ...
Yinde kangakanani leyo umjikelezo SMT quotation ukwenza t ...